Shir looga hadlaayo arimaha qaxootiga soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu ka furmo Dalka Biljamka – STAR FM SOMALIA
Shir looga hadlaayo arimaha qaxootiga soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu ka furmo Dalka Biljamka
Waxaa lagu wadaa magaalada Brussels ee Dalka Biljamka in uu dhawaan ka furmo shir looga hadlayo arimaha qaxootiga Soomaaliya iyo sidii loo caawin lahaa dadka doonaya in dalkooda ay dib ugu laabtaan.
Shirkan waxaa Dowlada Federaalka Soomaaliya uga qeyb gali doona R’aizul Wasaaraha xukuumada Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Wasiiro kaitirsan Dowlada, waxaa sidoo kale shirka ka qeyb galaya wakiilo matalaya wadamada Kenya, Uganda, Itoobiya, Jabuuti iyo Yaman.
Waxaa Shirkan si wadajir ah u soo qaban qaabiyay midowga Yurub iyo hey’adda qaxootiga Qaramada Midoobay ee UNHCR, waxaana inta uu socdo shirkan diirada lagu saari doonaa sidii loo loo cawain lahaa qaxootiga Soomaaliyeed ee doonaya in dalkooda dib ugu laabtaan.
Kumanaan qaxooti Soomaali ah ayaa kunool xeryo qaxooti oo kuyaala Wadamada Dariska la ah Soomaaliya, waxaana qaar badan oo kamid ah Qaxootigaasi ay doonayaan in ay dalkooda dib ugu laabtaan ayna ka bilaabaan nolol cusub.
magaalada Cadaado waxaa ka dhacay dibad bax looga soo horjeeda al-shabaab(Daawo Sawirada)
Gebar soomaaliyeed oo kufsi loo geestay ayaa laga celiyey Australia